‘डेसान’ मा निशानको भूमिका कस्तो ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘डेसान’ मा निशानको भूमिका कस्तो ?
कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि अधुरैमा रोकिएको चलचित्र ‘डेसान’ को छायांकन निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै पुनः सुरु भएको छ । चलचित्रलाई कमल एकचै मगरले निर्देशन गरिरहेका छन् । उनका अनुसार, अब चलचित्रको २० प्रतिशत छायांकन मात्र बाँकी छ । सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित भएर निर्माण भइरहेको यो चलचित्रबाट अभिनेताको रुपमा निशान चौहानले डेब्यू गर्दैछन् ।
बाल्यकालदेखिको हिरो बन्ने सपना पूरा भएकोमा उनी खुसी छन् । चलचित्रमा आफ्नो गाउँले यूवकको भूमिका रहेको उनले बताए । उनी ‘म्यानहन्ट नेपाल २०१६’ का मिष्टर पर्सनालिटी र ‘टप मोडल नेपाल २०१८’ का विजेता समेत हुन् । चलचित्रमा उनले नव-अभिनेत्री पुनम थापासँग रोमान्स गरेका छन् । ‘डेसान’ मा नम्रता सापकोटा, भोलाराज सापकोटा, कविता आले, नुरुङ राई, आरुष जंग सारुलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ ।
चलचित्रलाई चक्र महर्जनले खिचिरहेका छन् । चलचित्रमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे जानकारी दिँदै निशानले भने- ‘गाउँमा हुर्किएको एउटा केटा । जीविको पार्जनका लागि उसले गाउँमा कुखुरा पालन गरेको छ । त्यही क्रममा उसको जीवनमा एक युवतीको प्रवेश हुन्छ । त्यसपछि उसको जीवनमा आउने उतार-चढावमा चलचित्र केन्द्रित छ ।’
कथा र चरित्रलाई न्याय गर्न आफूले शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा निकै मिहिनेत गरेको निशानको भनाई छ । उनले चलचित्रमा दर्शकले आफूलाई वास्तविक जीवनभन्दा विल्कुलै फरक पाउने बताएका छन् । उनलाई पहिलो चलचित्र एक्सन-लभस्टोरी गर्ने इच्छा रहेछ । तर, ‘डेसान’ बाट त्यो पूरा हुन सकेन । भोलीका दिनमा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता एक्सन-लभस्टोरी चलचित्र हुने उनी बताउँछन् ।